Boeing iyo Azerbaijan Airlines waxay ku dhawaaqeen heshiiska 787 Dreamliners, Freighters
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Boeing iyo Azerbaijan Airlines waxay ku dhawaaqeen heshiiska 787 Dreamliners, Freighters
Airlines • Airport • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • Shirka Warka Warshadaha • News • Gaadiidka • Wararka Mareykanka
Azerbaijan Airlines waxay ku dhawaaqday amar shan ka badan 787-8 Dreamliners.
Boeing iyo Azerbaijan Airlines (AZAL) waxay ku dhawaaqeen amar shan kale oo ka badan 787-8 Dreamliner iyo balanqaad ah inay iibsanayaan laba xamuul oo waaweyn. Heshiiska, oo lagu dhawaaqay 2017 Dubai Show, ayaa lagu qiimeeyaa qiyaastii $ 1.9 bilyan oo ah qiimaha liiska hadda.
Balan qaadka xamuulka ayaa la soo gabagabeyn doonaa waqti dambe.
Azerbaijan Airlines ayaa sidoo kale shaacisay inay noqon doonto macaamiil bilaw u ah barnaamijka Beddelka Gear ee 787 kaas oo Boeing Global Services ay siineyso shirkadda xamuulka ah qiimo jaban oo loogu talagalay dayactirka iyo hubinta qalabka geeska ee duulimaadkeeda Dreamliner, oo hadda koraya ilaa XNUMX diyaaradood.
“Dalbashada 787 diyaaradood oo dheeraad ah oo ah nooca loo yaqaan Dreamliner ayaa si weyn u ballaarin doonta awooda duulimaadyadayada, taas oo noo oggolaaneysa inaan u adeegno meelo cusub oo aan qaadno rakaab badan,” ayuu yiri madaxweynaha AZAL Jahangir Askerov. "Waxaan ku faraxsanahay inaan ballaarinno iskaashiga aan la leenahay Shirkadda The Boeing, oo iyadu ah lamaane la isku halleyn karo oo keenaya diyaarado casri ah, isla markaana naga caawinaya howlaha iyo dayactirka diyaaradaha."
“Waxaan ka mahadcelineynaa kalsoonida sii kordheysa ee Azerbaijan Airlines ee Boeing 787 iyo duulimaadka wax ku oolnimada shidaalka iyo astaamaha rakaabka ka farxiya,” ayuu yiri Kevin McAllister, madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee diyaaradaha Boeing. 787 Dreamliner wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa qorshaha casriyeynta maraakiibta Azerbaijan, wuxuu ka caawin doonaa inay furaan wadooyin cusub, kana qayb qaataan guushooda muddada dheer.
"Boeing waxay ku faraxsan tahay inay bilowdo barnaamijka isweydaarsiga qalabka isweydaarsiga ee 787 oo ay la leedahay Azerbaijan Airlines," ayuu yiri Stan Deal, Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud ee Boeing Global Services. "Barnaamijkani wuxuu sii wadi doonaa duulimaadyada diyaaradaha 787s iyadoo diyaarinaysa qiimo jaban oo lagu kalsoonaan karo oo ah iibsashada qalabka cusub ee soo degida iyo dib u habeynta qalabka."
Azerbaijan Airlines waa duulimaad hawleed iyo hoggaamiye weyn ee gobolka Bartamaha Aasiya, waxayna u adeegtaa 40 meelood meel 25 dal. Shirkada diyaaradu waxay hada duulisaa labo 787 diyaaradood iyo waliba raxan Boeing 757 iyo 767s ah.
Diyaaradda Boeing 787 Dreamliner ayaa ah tan ugu iibinta badan diyaarado mataano mataano ah taariikhda. In ka badan 65 macmiil ayaa amar ku bixiyay in ka badan 1,275 Dreamliners ilaa iyo hadda taas oo ay ugu wacan tahay qoysaska waxtarka shidaalka aadka u badan iyo waayo-aragnimada rakaabka doorbidaya
Maraakiibta 787 waxay duuleen in kabadan 200 milyan oo rakaab ah halka ay keydsadeen in ka badan 19 bilyan oo rodol oo shidaal ah, taasoo u sahashay shirkadaha duulimaadyada inay furaan in ka badan 170 jidad cusub oo aan joogsi lahayn oo adduunka ah.
Boeing's 787 Landing Gear Overhaul iyo Barnaamijka Isdhaafsiga wuxuu siiyaa xal fudud oo dhaqaale oo loogu talagalay maareynta qalabka dayactirka, iyadoo lagu dhisayo taariikhda guusha Boeing ee barnaamijyada isdhaafsiga. Bixinta, markabku wuxuu ku beddeli karaa geerka soo degaya ee u baahan in la dayactiro ama laga cusboonaysiiyo shay kale oo hub ka degis ah oo ka yimid barkad ay Boeing haysato. Adeegani wuxuu baabi'inayaa baahida loo qabo in hawl wadeenadu qandaraas, jadwal iyo maareeyaan nidaamka dayactirka.
Boeing Global Services oo xarunteedu tahay Texas, waxaa lagu sameeyay isku-darka awoodaha adeegyada dowladda, goobaha iyo qaybaha ganacsiga hal ganacsi oo macaamiisha diiradda saaraya. U shaqeynta sidii cutub seddexaad oo ganacsi oo Boeing ah, Global Services waxay siisaa adeegyo agile, kharash-tartan macaamiisha ganacsiga iyo dowladda adduunka oo dhan.